लामो छुट्टीमा अन्तरंग पल - दसैं विशेष - साप्ताहिक
चाडबाड त्यसै रमाइलो हुन्छ । दसैंमा लामो बिदा पनि हुन्छ । यही अवसर उपयोग गर्दै घरभन्दा बाहिर कतै रमणीय स्थानमा गएर बिदा उपयोग गर्नेे सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यस्तो हो भने योजना बनाउँदा थोरै आफ्नो यौन क्रियाकलापको पाटोलाई पनि समट्नुभयो भने बिदाको उपयोग थप अविस्मरणीय हुन्छ । लामो छुट्टी पनि हुने हुँदा घुमफिरसँगै यौन आनन्दलाई अविस्मरणीय बनाउनु आफैंमा रोमाञ्चक हुन्छ । यो आफ्नो यौन साथीसँग अझ गहिरो माया साटासाट गर्ने उपयुक्त समय पनि हो । अन्य समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको समयलाई यतिबेला भरपुर उपभोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही नयाँ सोच जन्माउनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा फेस्टिभलको समयमा पनि आफ्नो यौनजीवन अझ उत्साहजनक होस् ।
रोमाञ्चक समयलाई औपचारिक नबनाउनुहोस्
जब लामो छुट्टीमा हुनुहुन्छ तब आफूले लगाउने पहरिन सामान्यभन्दा फरक बनाइन्छ नै, त्यसका साथै सुत्ने कोठा पनि अन्य समयभन्दा फरक हुनुपर्छ अर्थात् कोठामा केही न केही नयाँपन दिनुपर्छ, जसले तपाईं र तपाईंको यौन साथीलाई सम्पूर्ण कुरामा नयाँपन महसुस गराउन सकोस् । त्यसका साथै जब यौन कार्य सुरु गरिन्छ, सामान्य समयभन्दा बढी रोमाञ्चक हुने प्रयास गर्नुपर्छ । समय प्रशस्त भएको हुँदा जब दुवै जना रोमाञ्चक मोडमा पुगिन्छ त्यो समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
अन्य समयभन्दा छुट्टीको समयमा आफ्नो पार्टनरसँग घुलमिल हुने प्रशस्त समय हुन्छ । त्यही भएर कुनै पनि कुरामा हतारिनु हुँदैन । प्रत्येक क्रियाकलापलाई लामो समय लगाएर पूरा गर्नुपर्छ । जस्तै एक–अर्कालाई सघाउँदै एकैपटक नुहाउने, एक–अर्काको शरीर मसाज गरिदिने जस्ता काम बिस्तारै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जब तपाईं होलिडे सेक्सका लागि तयार हुनुहुन्छ भने एक–अर्कालाई खुलस्तसँग बुझ्नुपर्छ, शारीरिक तथा मानसिक दुवै रूपमा । एक–अर्काको सोचदेखि शारीरिक बनावट सबैको खुलस्त अध्ययन गर्नुपर्छ र एक अर्काको बौद्धिकता एवं शरीरको प्रशंसा गर्न पनि छुटाउनु हुँदैन ताकि होलिडे अविस्मरणीय बनोस् ।
केही नयाँ सोच्नुहोस्
यो छुट्टीमा भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गर्न प्रत्येक कुरालाई नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ । नयाँ स्थान, नयाँ–नयाँ प्रकारका खानेकुरा, नयाँ–नयाँ गतिविधि अनि प्राकृतिक हावा भएको स्थानजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ताकि यी सबै कुराले आफ्नो यौन क्रियाकलापलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आनन्ददायक बनाओस् । स्थान खानपान मात्र नभएर यौन गतिविधिलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ र त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । पार्टनरलाई पनि बढी चनाखो हुन प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रमाइला कुराकानी गर्नुका साथै आफूले जानेका रोमाञ्चक विषयवस्तुहरू साटासाट गर्नुपर्छ ।
बिहानको समय छान्नुहोस्
जब तपाईं घरमा हुनुहुन्छ र हप्ते बिदामा हुनुहुन्छ भने यौनकार्यका लागि बेलुकीको समय नै किन ? अन्य समयमा समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने हुँदा बेलुकीपख उपयुक्त समय हुन सक्छ, तर जब लामो भ्याकेसनमा भइन्छ भने जुनसुकै समय पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । छुट्टीको समय खाली नै खाली हुने हँुदा सबैभन्दा उपयुक्त समय बिहान हुन्छ । बिहानीपख नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने हुँदा त्यसले आफूलाई फरक समेत अनुभव गराउँछ ।
ताजा फलफूल प्रशस्त खानुहोस्
लामो समयको बिदामा हुँदा आफ्नो यौन जीवनलाई फरक महसुस गराउन ताजा र केही चकलेटी चिजहरूले नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छन् । यस्तो समयमा विशेष गरी स्टबेरी, क्विवी, एभोकाडोजस्ता शरीरमा भित्रैबाट ऊर्जा बढाउने फलफूलका साथै विभिन्न स्वादका चकलेट अनि आइसक्रिम उपयुक्त हुन्छन् । यदि लामो बिदामा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने यौन साथीसँग एउटै चकलेट वा आइसक्रिम सेयर गर्न सकिन्छ । यसले फाइदा पनि गर्छ । किनभने एउटै आइसक्रिम वा चकलेट बिस्तारै दुवैले मिलेर खाँदा यौन चाहना क्रमश: बढ्दै जान्छ र यौन कर्म अझ रमाइलो हुन्छ ।
यात्रालाई यौनमय बनाउन चाहने हो भने आफू बस्ने होटलको कोठा जहिले पनि प्रकृतिसँग सहज रूपमा सात्क्षात्कार हुने खालको रोज्नुपर्छ । जस्तो कि नदी वा सामुद्रिक तट हिमाली श्रृंखला, जस्ता कुरा सहज देख्न सकिने स्थान हुनुपर्छ । अझ बेडरुममा प्राकृतिक हावाको राम्रो प्रवाह होस् जसले दुवैमा अन्तरह्दयदेखि नै नयाँपन एवं रोमाञ्चकता भर्न सकोस् ।
मानिसको स्वभाव नै हो, जोसमा होस गुमाउने । यौन साथीसँगै भएपछि धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ ताकि रमाइलोका लागि गरिएको यात्रापछि सास्ती बेहोर्नु नपरोस् । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । यदि तपाईं नियमित यौन साथीसँगको छुट्टीमा हुनुहुन्छ भने त पहिलेदेखि नै सतर्क हुनुभएको हुनसक्छ तर नयाँ यौन साथीसँगको रमाइलोमा हुनुहुन्छ भने यौनजन्य रोगबाट जोगिन तथा सुरक्षित यौनसम्पर्कका लागि कन्डमजस्ता अस्थायी साधनको व्यवस्था पहिले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यदि श्रीमती वा प्रेमिकासँगको होलिडेमा हुनुहुन्छ भने पनि गर्भ नरहोस भनेर कण्डम जस्ता सामग्रीको अग्रिम तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षासँगै शारीरिक सुरक्षामा पनि उतिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । लामो छुट्टीमा निस्किएका जोडीले आफ्नो गन्तव्यका बारेमा परिवारजनलाई जानकारी दिनुका साथै आफू र कुन ठाउँमा जाँदैछु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ जाँदा बस्ने, खाने र त्यहाँको मौसमका सम्बन्धमा यथेष्ट जानकारी लिनुपर्छ भने सुरक्षाको हिसाबले कति संवेदनशील स्थानमा हुनुहुन्छ त्यसको ख्याल गरी सोही अनुरूपको तयारी गर्नुपर्छ ताकि आफ्नो रोमाञ्चक होलिडे सानो कुराले गर्दा खल्लो नहोस् ।
आफू सुत्ने बेडरुमलाई नै सेक्सी बनाउनुपर्छ ताकि आफूलाई हरकुरा सेक्सी लागून् । कोठाको डेकोरेसन, बेड, कोठामा गुन्जने म्युजिक, त्यहाँको पर्फुयम सबै नयाँ एवं रोमाञ्चक हुन् ताकि ती सबै कुराले आफ्सेआफ वातावरण रोमाञ्चक बनोस् ।
महत्वपूर्ण कुरा सरसफाइमा ध्यान दिनु पनि हो । निश्चित समयमा नुवाइधुवाइ गर्ने, नित्यकर्म गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ताकि आफ्नो पार्टनरले शरीरको कुनै पनि अंगबाट दुर्गन्ध महसुस गर्नु नपरोस् र त्यही गन्धका कारण दुई जनाबीचको रोमाञ्चकता नखल्बलियोस् ।
यौन कार्य सम्पन्न भैसकेपछि पनि एक अर्कालाई भरपुर चुम्बन गर्ने, टाँसिएर सुत्ने जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ताकि दुवै जनामा अगाध प्रेम भएको आभास होस्, जुन कुराले तपाईंहरूमा विश्वाससमेत बढाउँछ । यो समयमा एक अर्काले नयाँ–नयाँ कामहरू गर्ने तथा सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा एक–अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भने प्राप्त उपलब्धिलाई रोमाञ्चकतातर्फ मोड्नुपर्छ ।
 धेरै महिलासँग सम्बन्ध राख्ने पुरुषले यौन क्रियाकलापलाई महत्वपूर्ण त मान्छन् नै, तर महिला साथीहरूसँगको सम्बन्धबाट कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् ।
 एक अध्ययनअनुसार नीलो आँखा हुने पुरुष त्यस्तै आँखा हुने महिला मन पराउँछन्, तर उनीहरूबाट जन्मिएको शिशुको आँखा पनि नीलो भए त्यसलाई राम्रो मान्दैनन् ।
 महिलाहरू मासिक धर्म (महिनावारी) को समयमा वा त्यसको ठिक अघि पूर्ण यौनआनन्द लिन्छन्, जुन समयमा महिलाहरूमा रक्तसञ्चार बढेको हुन्छ ।
 एक अध्ययनअनुसार कलेज जीवनमा यौन क्रियाकलापमा बढी सक्रिय युवा अपवादबाहेक कुनै न कुनै समय डिप्रेसनमा पर्छ । जबकि कलेज जीवनमा यौनसम्पर्क नगर्ने विद्यार्थीहरू सामान्य रहन्छन् ।
 यौन क्रियाकलापका दौरान महिलाहरू असाध्यै कल्पनाशील हुन्छन् । त्यसैले पनि यो समयमा उनीहरूलाई पूर्ण यौन सन्तुष्टि मिल्यो भने महिला–पुरुषको सम्बन्ध दह्रो बन्छ ।
 एउटा लक्का जवान पुरुष एक रातमा औसत ५ देखि ७ पटक यौन उत्तेजनामा आउँछ ।
 हप्तामा दुईदेखि तीन पटक यौनसम्पर्क गर्ने महिला–पुरुषमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
बढ्दै जान्छ ।
 रोमान्टिक उपन्यास पढ्ने युवतीहरूले त्यस्ता उपन्यास नपढ्ने युवतीभन्दा बढी यौन आनन्द उठाउँछन् ।
 यदि सेक्समा रुचि कम भए स्केटिङ वा कुनै एक्सरसाइज गरे दोब्बर इच्छा जागेर आउँछ ।